Casual Rib Sleeve Zipper Slimve's Bomber's Bomber jaket
$ 28.99 Ịgachi price $ 47.99
Agba AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ Khaki Red anụnụ anụnụ Black
6XL / ARMY Grey 5XL / ARMY Grey 4XL / ARMY Grey XXXL / agha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ XXL / UMUAKA AHRE XL / agha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ L / ARMY GREEN M / ARMY GREEN 6XL / Khaki 5XL / Khaki 4XL / Khaki XXXL / Khaki 4XL / Uhie XXL / Khaki XXXL / Uhie XL / Khaki XXL / Uhie L / Khaki XL / Uhie M / Khaki L / Uhie 6XL / Uhie M / Uhie 5XL / Uhie 4XL / dark blue 6XL / Black XXXL / acha anụnụ anụnụ 5XL / Black XXL / acha anụnụ anụnụ 6XL / dark blue XL / dark blue 5XL / dark blue L / acha anụnụ anụnụ M / acha anụnụ anụnụ 4XL / Black XXXL / Nwa XXL / Nwa XL / Nwa L / Nwa M / Nwa
Casual Rib Sleeve Zipper Slim Men's Bomber Jacket - 6XL / ARMY GREEN na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Nkebi Type: Uwe uwe & mkpuchi
ụdị: mgbe nile
Outerwear Type: Jaketị
olu akwa: Guzosie
Akụkụ nke a na-apụghị ịchọta: Ọ dịghị onye
Ụdị nkwụsị: Aka ncha
Asia Size: M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL
agba: Black, ọchịchịrị-acha anụnụ anụnụ, Red, khaki, Army Green
Season: Oge opupu ihe ubi, Oge mgbụsị akwụkwọ;
ụdị: Men's Casual Coat, Uwe Jaa
nhọrọ na na Top Ogologo ubu aka uwe
Mara: Anyị na-eji nha Eshia, nke na-abụkarị 2 ~ 3 nha karịa US / European size. Enwere ike inwe ọdịiche nke 1-3 cm n'ihi tụọ ntuziaka.
Ọ bụ ntakịrị ihe snug ma ọ dị oke mma! Ma 2-3x buru ibu karịa ihe ị na-enwetakarị ma ọ bụrụ na ịchọrọ nha US.
Ndị ahịa weere anyị 5.0 / 5 dabeere na nyocha 49472.